Baro meelaha ee Dumarka ka qiimeyaan Raga Arimaha Bulshada | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
Baro meelaha ee Dumarka ka qiimeyaan Raga
>Haweenku sidey u kala duwan yihiin ayey u kala duwan yihiin dookh ahaan. Taasina waxay keenaysaa inay kala aragti ka noqdaan markay qiimaynayaan ragga. Qaarba meelaha ay doorbidaan ayey ku soo qadimayaan, balse waxaynu falanqayn doonaa dhinacyada loo badan yahay. Goobaha ugu caansan.
3) Quruxda jidhka: ninka jidh ahaan u qurux badan wuxuu soo jiitaa dumarka, waana meelaha ugu caansan ee ay dumarku ka eegaan ragga. Gaar ahaan jooga dhererka wata. Mararka qaarkood markay habluhu tilmaamayaan nin waxay odhanaysaa waa ninka dheer ee lafta leh. Waad garan kartaa farriinta ay sido tilmaamtaasi.
4) Lebiska ( dhar-xidhasho): calaamadani waa mid ay ka siman yihiin dumarka inay eegaan waayo sidaynu hore u soo sheegnay dumarku waxyaabaha ugu weyn ee ay qiimeeyaan waa quruxda.Waxay markaaba idhaha la raacaan habka iyo dhar-xidhashada ninka. Siday gabadhu u jeceshahay inay lebisato markasta oo ay guriga ka baxayso, ayey jeceshahay nin isna sidaasi yeela. Waxyaabaha ay si fiican u eegaan waxa ka mid ah, dharka isku soo baxaya marka la xidho amma isku qurux badan marka la xidho.
6) Furfurnaanta: waa goob kale oo aad qiimo iyo qaayo u leh dumarka. Furfurnaanta raggu waxay u saamaxaysaa inay cid kasta la hadlaan una sheekeeyaan. Dumarku waxay aad u neceb yihiin ragga aamusan ee hadalka gaaban. Horaa loo yidhi dumar waa sheeko. Mid ka mid ah daraasad aan soo akhriyey waxay sheegaysaa dumarku ma aamusnaan karaan muddo toban daqiiqo wax ka badan. Intaasi wixii ka badan waxay bilaabaan sheeko. Markaa qodobkan furfurnaantu waa mid miisaan weyn ku leh dhinaca dumarka.
9) Afmiishaarnimo: waa calaamad kale oo ay eegaan haweenku marka ninku sheekaynayo, hadduu afmiishaar yahay wuxuu isticmaalaa hadallo iyo erayo macaan oo isku toosan, taasina waxay dhexqaadaa qalbiga gabadha, waxaynu ku beertaa xiiso gaar ah, oo ay ninkaasi u hayso. Horaa loo yidhi afmiishaarnimadu waa musixirnimo. Ragga afmiishaarinta ahi waxay sameeyaan dhacdooyin iyo sheekooyin been iyo khiyaali ku dhisan, oo ay ku soo jiitaanhaweenka, way adag tahay in sheekadiisa been la moodo, waayo qaabka iyo siduu u dhigay ayaa heer sare ah. Dumarka meelo badan ayey dalooshadaan raggani oo ay gabadha ku khasbadaan. Gabadhii waxay macaansanysaa hadalada, erayada iyo qaabka sheekadu u dhacayso, ka dibna isma kala garanayso meel ay joogto, taasina waxay ninkii siinaysaa fursad uu ku fushado dantiisii. Waxba yaanan hadal kugu daaline, waa inay dareensanaadaan haweenku arrintaasi.
11) Hadallada dabacsan: waa goob ay dumarka qaarkii xooga saaraan. Ragga hadalada dabacsan leh dumarka qaarkood way ka helaan, ka dibna waxay aaminaan inuu nin fiican yahay oo aanu hadal xumi ka soo bixin. Ragga hadallada qalafsan dumarku ma jecla, waxay taa bedelkeeda waxay soo dhaweeyaan ragga hadallada dabacsan ee aan lahayn jikaar, cay,ad-adkaan iyo hadal-gaabni. Sidey gabadhaha badankoodu u hadal dabacsan yihiin ayey doonayaan ragga hadalka dabacsan, oo aan shoodkh ku soo celin.